Daabacaawyada culeys-madow ama madow iyo caddaan gudahood OS X | Waxaan ka socdaa mac
Helitaanka ikhtiyaarka ah in lagu daabaco madow iyo caddaan ayaa joojin doonta xanuunka OS X
Miguel Angel Juncos | | Apple, Noticias, Tababarada
Xaqiiqdii in ka badan hal jeer ayaad aragtay baahida loo qabo in la daabaco dukumiinti madow iyo caddaan ah ama sawir cirro leh, ama shaqo dalbasho ama si fudud loo kaydiyo khad midab leh. Si kastaba ha noqotee, doorashadani had iyo jeer ma ahan mid waxtar leh sida aan u maleyneyno OS X gudaheeda, maadaama daaqada daabacaadda ee caadiga ah ay u badan tahay inaynaan heli doonin xulashadan.
Tani badanaa waxay sabab u tahay kantaroolayaasha laftooda ku dhex jira nidaamka ama sababta oo ah soo saaraha ayaan ka fikirin ikhtiyaarkan adeegsadaha. Dhanka kale xeelad yar ayaynu ku qaban karnaa sii wad isticmaalka adeeggan OS X gudahood hab fudud oo daabacan dukumintiga.
Si aan u fulino «khiyaanadan», waxa ugu horeeya ee aan qaban doonno waa inaan dul saarno dukumintiga oo aan ku dhajinno badhanka midig ee saxda ah (Ctrl + Click) si aan hadhow u dooranno «Furan» oo aan dooranno dalabka Aragga. Hadda waxaan isticmaali doonaa Faylka> Dhoofinta menu si ikhtiyaarka Qaabka uu u muuqdo halka aan ku dooran doonno PDF iyo goor dambe Filter Quartz waxaan dooran doonaa madow & cadaan ama Grey Tone haddii waxa aan dooneyno uu yahay Madoow iyo Caddaan ama miisaanka miisaanka siday u kala horreeyaan.
Marka wax walba la dhammeeyo, waxay ku keydineysaa dukumiintiga waddada aan ku soo sheegnay goobta waxaanna awoodi doonnaa inaan ku daabacno faylkaas labadan qaab. In kasta oo aysan ahayn sida ugu habboon ama ugu dhakhsaha badan ee lagu daabaco daabacaadda nuucaan ah, laakiin ugu yaraan waa habka ugu nabdoon ee lagu heli karo doorashadan illaa soo saaraha daabacadeena su'aasha laga hadlayo uu deign si uu muuqaalkan ugu dhex dhigo kantaroolayaasha.
Haddii, dhinaca kale, dhibaatadeena ay tahay inaysan noo oggolaanayn inaan wax ku daabacno OS X, laga yaabee soo celinta nidaamka daabacaadda ayaa naga caawin kara arrintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Helitaanka ikhtiyaarka ah in lagu daabaco madow iyo caddaan ayaa joojin doonta xanuunka OS X
Waxa i daalay ayaa ah in magacyadu ay dadaal dheeraad ah ku bixiyaan sidii loo horumarin lahaa Windows-ka marka loo eego Mac-ka, marka lagu daro qorshaynta gabowday ee daabacayaal badan (hadaanay wada ahayn), khad iyo leysar labadaba. Kharashka ugu dambeeya ayaa ku filan si midka laba nidaam oo hawlqabad ah waqtigiisa ku gudba, wham !, Ma jiro kontaroole la jaan qaadi kara, oo haddii ay jiraan, shaqooyinka waxaa loo dhimay xulashooyinka aasaasiga ah (aad u badan).
Waxaan hayaa HP Color Laserjet 1600 oo wali sifiican ushaqeeya, laakiin sida nidaamyada hawlgalku usocdaan (maahan soosaarayaasha daabacaada), waxaan isku arkaa xaalad: Waxaan ku noqdaa Libaax ama badalaa daabacaha. Horeyba way fiicantahay inaan ku tiirsanaano damaca midba midka kale.
Run baad sheegaysa sida aduunka oo kale ... 100% waan ku taageersanahay waxaad sheegto ....
Jawaab Ramón OL
Wuu arkay dijo
Weli ma tagayo maxaa yeelay iima oggolaaneyso inaan dhoofsado dukumiintiga maaddaama uu leeyahay erey sir ah
Ku jawaab elvi
Nidaamka daabacaadda ama nooca iyo tayada warqadda hadba sida ay noqon karto, waxaa jira ikhtiyaar, waa inaad raadisaa, si aanad ugu dhammaan sameynta tallaabooyin taxane ah oo aan loo baahnayn sida kuwa halkan lagu sharaxay, waana iga yaabisay ahaanshaha "khubaro tufaax ah" waxay ku kacaan dhammaan cibaadadan iyo in ka badanba kuwa cusub ee doonaya inay ka baqaan dhammaan howlaha lagu sharaxay. sidoo hee "khubaro tufaax ah"
Waxay ila noqotay wax layaab leh maxaa yeelay xaqiiqda oo ah inaan iibsanno gulufyada saacadaha oo dhan, XULASHADA LAGU SOO daabacayo madow iyo caddaan lama oggola. Tan iyo markii aan sameeyay dhammaan talaabooyinka laakiin daabacahayga, in kasta oo AY HAYSATO midab madow maadaama ay ka maqan tahay magenta, ma taageeri daabacaadda. Waxaan u arkaa inay gebi ahaanba la fulin karo.
Aad baad ugu mahadsantahay qoraalka !!! Aad ayey ii anfacday aniga !!!!
Ku jawaab MACarena
Tixraac wanaagsan oo ku saabsan sida loo daabaco B&W
Noocii ugu dambeeyay ee farsamada iMovie iyo Force Touch ... isku dhafka saxda ah
Taageerada Boot Camp ee Windows 7 Dhamaadka